लाप्राक प्रोेजेक्ट सम्पन्न गर्नु एनआरएनएलाई ठूलो चुनौती छ : श्याम तामाङ, एनआरएनए बहराइनका संस्थापक - Janata Times
लाप्राक प्रोेजेक्ट सम्पन्न गर्नु एनआरएनएलाई ठूलो चुनौती छ : श्याम तामाङ, एनआरएनए बहराइनका संस्थापक
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय रहँदै आउनुभएको श्याम तामाङ अहिले पनि एनआरएनएमा उत्तिकै क्रियाशील हुनुहुन्छ । विदेशी प्रविधिलाई नेपालमा भित्राएर नेपालको आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्ने तामाङ एनआरएनए बहराइनको संरक्षकसमेत हुनुहुन्छ ।
गत २०७२ सालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पताका भूकम्पपीडितको लागि राहत, पुनःनिमार्णमा उहाँको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । एनआरएनएले सञ्चालनमा ल्याएको लाप्राक प्रोजेक्टमा समेत उहाँले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँँदै आउनुभएको छ । केही समयअघि नेपालमा आएको बाढीपहिरोका कारण पीडित बनेका विशेष गरि तराईको सत्तरी जिल्लामा गएर एनआरएनएले राहत वितरण तथा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको थियो ।
सो राहत वितरण कार्यमा संयोजक भएर उहाँ खटीनुभएको थियो । एनआरएनएले नेपाली जनतालाई पुरयाएको योगदान, राहत वितरण र लाप्राक प्रोजेक्टका विषयमा केन्द्रित रहेर तामाङसँग जनता टाईम्सका लागि किरण बुढाथोकीले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत छ :
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपालमा के कस्तो कार्य गर्दै आएको छ ?
धन्यवाद । गैरआवासीय नेपाली संघले नेपालीको हरेक दुखमा साथ दिदै आएको छ । विगतदेखि नै नेपालको प्राकृतिक विपत्तिमा विश्वभरका एनआरएनए जुट्ने गर्नुभएको छ । जस्तो नेपालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पता होस वा नेपालमा नाकान्दी हुँदा होसा वा केही समयअघि आएको बाढीपहिरोमा होस जुनसुकै विपत्ति वा संकटमा पनि गैरआवासी नेपाली संघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गदै आएको छ ।
एनआरएनएले तराईका बाढीपीडितको लागि सत्तरीमा राहत वितरण गरेको थियो । त्यहाँ कती बाढीपीडितलाई राहत वितरण गर्नुभयो ?
हालसालै नेपालमा आएको बाढीपहिरोको कारण धेरै धनजनको क्षति हुन पुग्यो । हालसालै तराईमा आएको बाढी पहिरोमा परेका नेपालीहरुलाई संसारभरि बसेका दिदी बहिनी दाजुभाई सबैले आफनो गाँस काटेर भएपनि दुई चार रुपैयाँ बचत गरेर एक दुई डलर संकलन गरेर राहत संकलन गर्नुभयो । जसमा विभिन्न देशको एनआरएनए च्याप्टरबाट संकलीत करिब १ करोड रुपैयाँ र एनआरएनए अध्यक्ष शेष घले ज्यूले सहयोग गर्नुभएको रु १ करोड गरेर जम्मा २ करोड रुपैयाँको राहत वितरण गरयौ । हामीलाई सरकारले सत्तरी जिल्लामा राहत वितरण गर्ने अनुमति दिएकाले त्यहाँ करिब ५ हजार परिवारलाई राहत पुरयाउने तार्गेट राखेका थियौ । सरकारबाट अनुमती पाएपछि सत्तरीका करिव ४ हजार परिवारलाई प्रत्यक्ष वितरण गरयौ र चार पाँच सय प्याकेज प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडियोमार्फत वितरण गर्यौ ।
त्यहाँ गुरुङ संस्कृति भल्कने गरि घर बनाउँदा दुई तले बनाउनुपरयो । भूकम्पप्रतिरोधी घर र दुई तले त्यो पनि नमुना बनाउनुपर्दा अनुमानीतभन्दा कस्ट बढी पर्न गयो । अहिले प्रति घर वरावर १३÷१४ लाख पुगेको छ । अहिले बाटो, ठाँउको कारण त्यसको कस्ट हाई हुन पुग्यो ।
सत्तरीमा पुग्दा त्यहाँका बाढीपीडितको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
त्यहाँ पुग्दा निकै गर्मी थियो । हामीलाई नेपाल सरकारले जुन तथ्यांक उपलब्ध गराएको थियो, त्यसैलाई आधार बनाएर राहत वितरण गरेपनि सरकारको तथ्यांक वास्तावीक तथ्यांक भएको देखिएन । सरकारले एकद्धार प्रणाली लागू गरेकाले हामीले सत्तरीमा राहत विरतण गरेका हौ । हामीलाई तोकिएको ठाउँ निकै अप्ठ्यारो र यातायातको समस्या थियो । सरकारले निकालेको आंशिक र पूर्ण पीडितको तथ्यांक वास्तावीक नहुँदा तोकिएको ठाउँमा राहत वितरण गर्न निकै समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
त्यहाँको दृश्य हेर्दा निकै हत्तास लागेपनि संसारभरिका साथीहरुले संकलन गरेको राहत वितरण गर्न पाउँदा खुसी पनि महसुस भएको थियो । हामीलाई निकै रिस्की भएको थियो । राहत वितरण अलवा स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गरेका थियौ । त्यहाँका करिब १ हजार ६ सय परिवार स्वास्थ्य शिविरबाट लाभान्वित हुनुभएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहान्छु ।
एनआरएनएले बाढीपीडितको लागि राहत वितरण गरेसँगै भूकम्पपीडितको पुनः निर्माणमा पनि जुटिरहेको छ । जस्तो लाप्राक पोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले लाप्राक पोजेक्ट कहाँ पुग्यो ?
भूकम्पपछि एनआरएनएले हजार घर बनाउने प्रतिबद्धता सेन्टीमेन्टमा गरेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । किनकी कस्तो ठाउँमा हो त त्यस्तो घर भन्ने विषयमा त्यत्ती खेर छलफल गरिएन् । त्यो बेला सरकारले हामीलाई नमुना ठाउँमा नमुना बजेट बनाउने प्रस्ताव गरयो । त्यो बेला हाम्रो बजेटसँग मेल खाएकाले हामीले फिजिबिलिटी हेरेनौ । सुगम ठाउँमा एक हजार घर बनाउनु र त्यो ठाउँमा १ सय घर बनाउनु वरावर हो जस्तो लाग्छ ।
त्यो ठाउँमा ढुंगाको कमी छ । बाटो निकै साँघुरो छ । त्यहाँका बासिन्दा बानी परेकाले बस्न सके पनि बाहिरका मानिस लामो समय बास बस्न सक्दैन् । त्यहाँ आगो बालेर बाहेक कोही बस्न सक्दैन् । त्यो ठाउँलाई हेर्दा भगवानले पनि कस्तो ठाउँ बनाए जस्तो लाग्छ । गएको अक्टोरसम्म ५ सय ७३ घर सम्पन्न गर्ने टार्गेट राखेका थियौ । सरकारबाट गएको डिसेम्बरमा घर बनाउन अनुमती प्राप्त भएपनि मार्च अप्रिलमा भवन विभागबाट नक्सापास भएर आएकाले समयमा निर्माण सकाउन समस्या भइरहेको छ ।
लाप्राक पोजेक्ट सञ्चालमा मुख्य त मोटर बाटो नै हो । त्यसपछि त्यहाँ बस्नको समस्या छ । त्यहाँ विश्वभरबाट आउने भोलेन्टर जो हुनुहुन्छ उहाँहरु केहि पनि दुई दिन पनि बस्न सक्नुहुन्न् । त्यहाँको मौसम बर्खामा समेत आगो बालेर बस्नुपर्छ ।
लाप्राक पोजेक्ट सञ्चालमा के कस्ता समस्या देखिएका छन् ?
मुख्य त मोटर बाटो नै हो । त्यसपछि त्यहाँ बस्नको समस्या छ । त्यहाँ विश्वभरबाट आउने भोलेन्टर जो हुनुहुन्छ उहाँहरु केहि पनि दुई दिन पनि बस्न सक्नुहुन्न् । त्यहाँको मौसम बर्खामा समेत आगो बालेर बस्नुपर्छ । साथै स्थानीयबासीलाई पनि भोलेन्टरमा काम गर्न समस्या देखिन्छ र बाहिरबाट लगिने दक्ष जनशक्तिलाई त्यहाँ बस्ने समस्याले लाप्राक प्रोजेक्ट समयमा सम्पन्न गर्नमा समस्या देखिएको हो ।
अहिलेसम्म लाप्राक प्रोजेक्टको प्रगति कस्तो छ ?
गएको अक्टोरसम्म ५ सय ७३ घर सम्पन्न गर्ने टार्गेट राखेपनि हामीले अहिलेसम्म ३ सय घरको फाउण्डेसनको काम पूरा सम्पन्न गरेर डिपीसी हालीसकेका छौ । १५÷२० वटा घरको फस्ट प्लोर सकेका छौ ।
लाप्राक प्राजेक्टमा लागत बढ्न गएको हो ?
त्यहाँ गुरुङ संस्कृति भल्कने गरि घर बनाउँदा दुई तले बनाउनुपरयो । भूकम्पप्रतिरोधी घर र दुई तले त्यो पनि नमुना बनाउनुपर्दा अनुमानीत भन्दा कस्ट बढी पर्न गयो । घरको माथिल्लो तलामा बाँस प्रयोगमा ल्याइएको र तल्लो तलामा इन्टोर लोकिङ ब्रिक्स प्रयोगमा ल्याइएकाले लागत बढ्न गएको हो । सिसिबी टिट्रमेन्ट गरेपछि बाँसको आयू ४० वर्षभन्दा बढी मानिदै आएको छ ।
विश्वको तथ्यांक हेर्दा भूँइचालो आउँदा भूकम्पपीय र सुरक्षाको हिसावले बाँस फलामभन्दा बलियो मानिन्छ । अमेरिकी सरकारलेसमेत भूकम्पप्रतिरोधी घरको लागि माथिल्लो तलामा बाँसको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । अहिले प्रति घर वरावर १३÷१४ लाख पुगेको छ । अहिले बाटो, ठाँउको कारण त्यसको कस्ट हाई हुन पुग्यो । हामीले त्यो बेला एनआरएनले प्रोजेक्ट छनौट गरेका थिएनौ । अहिले हामीलाई लागिरहेको छ कि नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा १ हजार घर वरावर त्यो ठाउँमा १ सय वरावरको लागत हुने रहेछ ।
एनआरएनएले लाप्राकमा सञ्चालन ल्याएको प्राजेक्ट जस्तै धेरै राम्रा काम नेपालमा भएका छन् । त्यसैले विश्वभर रहनुभएका सम्पूर्ण एनआरएनहरुबाट नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगिरहेकाले हामी निकै गौरवावित महसुस गरिरहेका छौ ।
२८ भाद्र २०७४, बुधबार १८:२५मा प्रकाशित
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने दललाई तीन दिनभित्र निवेदन दिन निर्वाचन आयोगको सूचना
निर्बाचन आयोगमा राप्रपा ,राप्रपा प्रजातान्त्रिकद्धारा दल दर्ता
मतपत्र छपाईका बारेमा आयोगले सर्वोच्चमा पत्र पठाउदै, अदालतको आदेशपछि मात्र छपाई शुरु हुने
नैनसिंह महरको कारण ओखलढुंगा कांग्रेसलाई धौधौ